महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि चन्द्र ढकालको उम्मेद्वारी दर्ता – Clickmandu
महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि चन्द्र ढकालको उम्मेद्वारी दर्ता
क्लिकमान्डु २०७७ कार्तिक ५ गते १४:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदावारी दर्ता गरेका छन् ।
बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकूमा ढकालसहित उहाँको प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । ढकाल प्यानलबाट बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एशोशियट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासंघको ५४औं साधारणसभा तथा निर्वाचन कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएको थियो । पछि पटकपटक साधारणसभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण साधारणसभा हुन सकेको थिएन ।
गत वर्ष नै बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले ढकाललाई महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदावार प्रस्ताव गरेको थियो । पछि गत फागुनमा काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो ।
महासंघको चुनावका लागि उम्मेदवारहरुले आजदेखि मंसिर ४ गतेसम्म मनोनयनपत्र दाखिला गर्नसक्नेछन् । मनोनयन दाखिला इमोलबाटै गर्न सकिने र त्यसको सक्कल कागजागत मंसिर ४ गतेभित्र महासंघमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानले समेत उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । महासंघको निर्वाचन समितिले बुधबार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो ।
किन बढ्यो जलविद्युत् कम्पनीको सेयर ?
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमाघुम्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् एक्सलट्रिप नेपालका अफरहरु
महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई चन्द्रागिरिमा अध्यक्ष गोल्छाको रिट्रिट, १० वर्षे भिजन पेपर पारित हुने
ब्रोकर कमिशन घटाउन माग गर्दै बोर्डमा लगानीकर्ताको प्रदर्शन (फोटो फिचर)